ပျူ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂ စာပေနှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု
၃ ရှေးဟောင်း ပျူမြို့တော်
မြန်မာ-တရုတ်သမိုင်းပညာရပ်သုတေသီ နှင့် မြန်မာ့သမိုင်းကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သော ဦးရည်စိန်မှ ယခုလို သုံးသပ်ထား၏ ။ ခရစ်နှစ်သုံးရာစုနောက်ပိုင်းနှင့် လေးရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် ပျူတို့တည်နေရာကို အတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားသော ရှေးတရုတ်မှတ်တမ်း လေးကျမ်းရှိ၏။ ထိုကျမ်းများသည်
Section of the His Jung (Xi Rong) in the Wei Lueh (Wei Lue) ၌ "ရှေးတရုတ်နိုင်ငံ (စိန့်တိုင်း) အနောက်ဘက်တခွင်ရှိ နိုင်ငံများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံများအကြောင်းများထဲ၌ ဖန်းယွယ့် (P'an-Yueh) နိုင်ငံရှိ၏ ။ထီးယဲန်ကျူနိုင်ငံ (T 'ien Chu or Tian Zhu Kingdom) ၏အရှေ့တောင်ဘက်လီပေါင်း သုံးလေးငါးထောင်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ယီပု (I-Pu orYi Bu) နှင့်နီးကပ်၏။ ထိုဒေသ (ဖန်ယွယ့်နိုင်ငံ) မှလူတို့သည် အရပ်ပု၍ စိန့်တိုင်းသားတို့နှင့်တူညီသည်။ ရှူနယ် (Shu State) မှကုန်သည်များသည် ထိုဒေသသို့ရောက်ခဲ့နိုင်သည်။" ဟုထူးထူးခြားခြားဖေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ထီး-ယဲန်ကျူ (Ti 'en Chu or Tian Zhu) ဟူသည် ဟိန္ဒူကိုအသံလှယ်ထားခြင်းဖြစ်၏။ ထိုတရုတ်စာလုံးနှစ်လုံး၏ ရှေးဟောင်းအသံထွက်သည် Hindu နှင့်ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်သည်။ ယခုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဆိုလိုသည်။ ယီပုမှာ ယူနန်နယ်ကို ဆိုလိုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ဘက် ယူနန်နှင့် နီးကပ်သည့် ဖန်းယွယ့်သည် ရှေးဟောင်းမြန်မာ သို့ ပျူနိုင်ငံ ဖြစ်သည်မှာထင်ရှား၏ ။ ဝေ့ပြည်ထောင်သမိုင်းအကျဉ်း၌ ပါသောစာပိုဒ်တွင် ဖန်ယွယ့် နိုင်ငံကို ဖန်ယွယ့်ဝမ်(င်) ဟူ၍လည်း ခေါ်၏ ။ ဟန့်ယိုယ့်မော်(င်) ဟူသည် ဟန့်လွယ့်မင်း ဟုအနက်ရှိ၏။ သို့ရာတွင်ဤသို့အနက်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းသည်အဖြေမှန်မရနိုင်ချေ။ 'ဟန့်' ဟူသောစာလုံးသည် 'ဖျောင်း' (P'iao)(ပျူ) ဟူသောစာလုံးနှင့် ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်သဖြင့် စာမူအဆင့်ဆင့်ရေးကူးရာ၌ မှားယွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်နှစ်လေးရာစုအလယ်တွင် ပြုစုပြီးစီးသော ဟွာယန်ဒေသသမိုင်းတွင် ‘ဖျောက်ယွယ့်” ဟုရေးသည်။ ဖျောင်းယွယ့် သို့မဟုတ် ဖျောက်ယွယ့် သည် ပျူဝတ် ကိုအသံလှယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပျူလက်ရာများဟု ထင်ရဖွယ်ရှိသော ရုပ်တုများ၌ အမျိုးသားများသည် အပေါ်ပိုင်းတွင် အဝတ်အစားဆင်မြန်းခြင်းမရှိဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွင် ချည်စဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်။ ရှေးဟောင်း တရုတ်ထန်ရာဇဝင်တွင် အမျိုးသားမျာသည် ပန်းရောင်ရှိသော ဖျဉ်အစတစ်ခုကို ခေါင်း၌ပေါင်းထား၍ ပန်းနှင့် ငှက်တောင်တို့ကို စိုက်ထားကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများမှာ ယနေ့ဗမာအမျိုးသမီးများနည်းတူ ပန်းရောင်ပုဝါရှည်ကို လက်တွင်စုံချ၍ ယပ်တောင်တစ်ချောင်းအားကိုင်ထားသည်၊ ကျောက်ဖြင့်လုပ်သော လက်ကောက်၊ ပုတီးစသည်တို့ကိုနှစ်သက်သည်၊ အိမ်ထောင်သယ်အမျိုးသမီးသည် ခေါင်းတွင် သျှောင်ထုံးထားသည်ဟု ဖော်ပြထား၏ ။
↑ ရည်စိန် - ပျူတိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ မည်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သနည်း၊ p.၄၈-၅၁၊ ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ
↑ ဒေါက်တာသန်းထွန်း - ခေတ်ဟောင်းမြန်မာရာဇဝင်(တအကြိမ်)၊ p.61
↑ ရည်စိန် - ပျူနိုင်ငံ၊ p.167-178၊ ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာ၊ ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်
↑ ဒေါက်တာသန်းထွန်း. ပျူတွေဘယ်ရောက်သွားသလဲ. သီရိဆွေစာအုပ်တိုက်, 205-206။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပျူ&oldid=554098" မှ ရယူရန်
၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။